Bogga ugu horeeya ee goobta intarnat-ka / Anigu waxaan helay sharciga deganaanshaha / Deegaanka / Gobol iyo degmooyin / Västra Götalands län / Lidköping
Dib u cusboonaysiinti ugu dambeysay: 6 11 2019
Waa sahalan tahay in laga helo joogti taanka Lidköping! Degmada Linköping waxeey lee dahay ku dhawaad 38 900 oo qof, waxeeyna si qurxoon ugu ag taalaa wabiga iswiidhian ugu weeyn, Vänern.
699 kiilomitir oo laba jibaaran
Skövde 48 kiilomitir
Trollhättan 61 kiilomitir
Göteborg 128 kiilomitir
Uu dhawaaanshaha biyaha jasiirada Kålland iyo sarta Läckö iyo buuraha Kinnekulle waxeey uu mecno tahay in dabiicada iyo waxyaalaha lagu arki karo howlaha dibada in ee dhaafsan yihiin kuwa caadiga ah. Waxaan uu noolnahay ku dhawaad sida aan markasto uu noolaan jirnay, biayaha uu dhaw, dhulka iyo dadka oo isku dhaw. Muhiim ee uu tahay mudada hada lagu jiro ee leh isbedal bulsho, calaminimo iyo handadaada bey'adeed. Lidköping waa degmo aad markasto ku dareemeeyso in lagu soo dhaweeynaayo haddii aad tahay qof dalxis ku joogo, ama howl ganacsi ka wadanaayo ama noloshada inta ka hartay aad dageeysid. Taasi ma ahan lee aragti laga qabo howlaha degmada ee sido kale aragtidaas waxaa leh oo kale dadka meesha degan.
Dadka Lidköping haddii aan nahay, waan jecel nahay la kulan, wada hadal iyo fikar kala bidalasho. Saas haddii san aheeyn, sidee loo sharaxi karaa in magaalo weeyninkeena la eg ee lee dahay 30 biibito?
Shirkada degmada ee lee dahay AB Bostäder waxeey heeysaa guryaal kiro oo ku yaalo bartamaha Lidköping, Saleby, Järpås, Vinninga, Gillstad, Tun iyo Örslösa.
Xafiis dalaal ee guriyada kuma yaalo degmada Lidköping.
Luuqadaha ugu badan ee ku hadlaan dadka ka yimid meelo ka baxsan waqooyiga-yurub oo halkaan laga helo waa carabi, soomaali, ingriis, tigrinya, dari, tigre, af bashtoo, afka ruushka, kurmanji iyo afka thayland.
Lidköping waxeey lee dahay jawi urureed oo sii fiican uu shaqeeyo lehna ururo badan oo diiwan galsan. Ururadaan waxeey ka howl galaan isboorti, dhaqamo, howlo dibadeed, jimcsi iyo in kale oo badan. Waxaa jiro dhowr kaniisado iyo ururo diimo. Diiwaanka-ururada ayaa ka heli kartaa ururka uu haboon hamigaada.
Degmada Lidköoingna waxeey lee dahay dugsi-heeso oo ee kala wado degmada Lidköoing, halkaasi ee caruur iyo dhalinyaro fursad ugu lee yihiin in ee tijabiyaan, ciyaaraan qalabka heesaha.
Degmadeena wax badan ayaa ku yaalo, sidii maktabad, xafiiska shaqada, xafiiska bulshada, qasnada ceeymiska, hey'adda canshuraha, bankiyaal, farmashiye. Dukaamo raashin oo badan, dhowr dukaamo alaab guri iyo dukaamo gacan labaad laga gato. Dukaamooyinka qarkood waxeey ku yaalin in yar oo ka baxsan bartamaha, kuuwana waxeey lee yihiin gadiid fiican.
Degmada gudaheed waxaa laga helaa xanaanad uu dhow degaanka. Lidköping waxaa laga helaa dugsi xanaano iyo guri maalmeedka reereed oo loogu tala galay caruurta uu dhaxeeyo 1 – 5 sano. Waxaa jiro xanaaneyn loogu tala galay caruurta oo leh waqti-shaqo oo aan raaxo laheeyn, waxaana jiro goobo-kulan oo loogu talo galay adiga iyo caruurta. Sido kale degmada waxaa ku taalo dugsi xanaano oo madaxbanaan.
Dugsiga xanaanada furan
Xanaanada furan waxeey soo bandhigeeysaa howl waxbrasho ee kooxeed oo loogu tala galay caruurta, waxuuna tageero uu heli kartaa waalidnimada. Xanaanda furan waeey ku socotaa qofka canug yar leh, laga bilaaba caruurta goor dhow dhashay ilaa lix jirka. Halkaan waxaa ku wada kulmo dadka waa weeyn iyo caruurta si ee waqti iskula qaatan iyo isla ciyaaraan. Howsha waa lacag la'an, mana loo baahno in codsi loo dirsado.
Guriga xilliga firaaqada waxuu ku socdaa caruurta iskuulka ee ku jirto da'da 6-12 sano ee waalidkoodu shaqeeyo ama waxbarto. Guriga xilliga firaaqada waxuu dhameeystiraa iskuulka, waxuna canuga siinaa xilli firaaqo oo mecno ku fadhiyo iyo tageero xagga hormarkiisa. Caruurta waxeey jogaayaan guriga xilliga firaaqada inta lagu jiro mudada iskuul l'aanta ama fasaxa.
Dugsiyada xanaanada iyo xanaanada caruurta ee degmadan Dugsiga xanaanada furan Dugsiga xilli-firaaqaha, hoyga xilli-firaaqaha iyo naadiyada xilli-firaaqaha
Fasalka ebaraadka waa hab iskuuleed aan waajib aheeyn oo loogu tala galay lix jirka, waxaana fasalkaan loogu tala galay in uu shaqeeyo sidii ka wareegid uu dhaxeeyso xanaanada iyo iskuulka waajibka ah. Caruurta jirto da'da lixda sano ee Iswiidhan badankood waa kaa diwaangalsan yihiin fasalka eberaadka. Dugsiyada hoose ee Lidköping dhamaantood waxeey lee yihiin howlo loo soo bandhigaayo oo loogu tala galay caruurta ku jiro da'da lix ilaa labo iyo toban sano.
Dugsiga hoose waxuu waajib ku yahay caruurta uu dhaxeeyso 7 sano iyo 16 sano. Caruurta badankood waxeey bilabaan fasalka 1aad dugsi xiliyedka deyrta sanadka ee buuxinaayaan 7 sano.
Fasalka caalamiga waa fasal diyaaris leh oo loogu tala galay ardayda dalka ku cusub ee jiro da'da 7 ilaa 16 sano.
Degmada Lidköping waxeey lee dahay dugsiga sare ee De la oo ku yaalo bartamaha Lidköoing. Waa iskuul firfircoonida ku badan tahay, lehna fursadooyin badan. Asagoo ee dhigato in ka badan 2000 oo arday, kana shaqeeyso ku dhawaad 300 oo shaqaale, waxuu saas ku noqonaa dugsiga sare ee ugu weeyn Skaraborg. Sido kale degmada waxaa ku yaalo Thoren Innovation School.
Bandhig balaan iyo fursado badan ayuu helaa qofkii doonaayo in wax ka barto Lidköping.
Campus Lidköping waxaa ku heeystaa fursad aad ku dhigato waxbarasho leh heer kala duwan; heer-asalka, herka dugsiga sare, heerka barashada shaqada ama heerka jaamacadeed. Sido Campus waxaa lagu soo bandhigaa iswiidhiska loogu tala galay ajnabiga, oo ah waxbarashada asaasiga ee iswiidhiska. Waxeey taasi ku jeedaa ajnabiga aan heeysan barashada asaasiga ee afka iswiidhiska. Sido kale halkaan waxaa ka jiro fursad lagu dhigto heer asaasi iyo heer dugsi sare.
Isbitaalka Skaraborg ee Lidköoing waa sidii isbitaalka Skaraborg Skövde, waa isbitaal leh qaabilaad degdeg. Daryeelka waxuu ka kooban yahay daaweynta-gudaha, qaliin, aqoonta cudurada buraha, aqoonta lafaha, daryeelka bukaanka dumarka, qaliin degdeg, radiologi, caawimaadadhaqdhaqaaqa jirka iyo jimicsiga bukaanka.
Sido kale isbitaalka waxuu lee yahay qaabilaadyo daryeel oo furan oo leh daryeelka caruurta, qeeybaha indahah-sanka-dhunta, maqalka iyo hawlaha-dhagoolada, daryeelka dimirirka ee dad waa weeyn, daryeelka dimirka caruurta iyo dhalinyarada, dhaqan celinta jirka caruurta iyo dhalinyarada iyo sheeybaar leh xarun-dhiig.
Ruggag caafimaadka markasto kula soo dhawaaw su'alahaada khuseeyo caruurtada ama waalidnimaadada. Waxaa laguugu siinta talo ku saabsan sidii naas-nuujinta, cuntada, jiifka, waalidnimada iyo canugaada haddii uu jirado.
Isbitaalka Skaraborg ee Lidköoing
Marksto aad hey'addaha dowlada la xariieeysid waxaa jirto fursad aad ku hesho caawinaad turjumaan. Markasoto waxaa tagi kartaa xafiiska isdhexgalka si ee lagaaga caawiyo turjumaan.
Degmada Lidköping ma ahane, shaqo dhiibaha weeyn oo kale ee sii jiro waa Såtenäs Flygflottilj, Västra Götalandsregionen, Dafgård, Jula, Electrolux, Volvo, Arla, Promens, Fazer.
Masaafad-tareemeed waxaa ka jirto Göteborg iyo Trollhättan ayadoo taasi suurta galisay xariir-gaadiid fiican.
Shaqooyinka ka banaan gudaha Lidköping